Jimicsiga guriga: astaamaha, tilmaamaha iyo laylisyada | Ragga Stylish
Sannad kasta waxaa jira wacyigelin badan oo ku saabsan hagaajinta qaabka jireed ee jirkeena. Dad badan ma jecla inay aadaan qolka jimicsiga sababo kala duwan awgood. Si kastaba ha noqotee, a jimicsiga guriga Waa xalka ugu fiican dadkaas aan rabin inay aadaan qolka jirdhiska. Qolka jir dhiska iyo jir dhiska ee gurigeenna ayaa noqon kara xulasho weyn.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan sifooyinka, qaybaha iyo waxtarka jimicsiga guriga.
1 Yoolalka jimicsiga guriga
2 Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato jimicsiga guriga
3 Booska iyo nooca jimicsiga
4 Dhimashada iyo kursiga keydka
Yoolalka jimicsiga guriga
Dadka badankood waxay yiraahdaan ma aadaan qolka jimicsiga oo isboorti ma sameystaan ​​maxaa yeelay ma haystaan ​​waqti ku filan. Waana inaan dhammaanteen leenahay waajibaadyo shaqo sidoo kale qoys iyo saaxiibbo. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan oo keliya jimicsi xoogaa ah 30 daqiiqo waxaadna ku sameyn kartaa guriga. Waxaa la ogyahay in dad badani ay ka tagaan jimicsiga noocan ah sababtoo ah ma haystaan ​​edeb ku filan oo ay ku jimicsadaan jimicsiga guriga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad jimicsi ku leedahay guriga way fududahay maadaama aad haysato qalab lagama maarmaan ah si aad u aragto hagaajinta muddo gaaban.
Jirdhiska guriga ayaa kaa caawin kara inaad waqti iyo lacagba u baahatid iyo sidoo kale hagaajinta jirdhiska jirka iyo maskaxda. Aynu aragno waa maxay ujeedooyinka ugu waaweyn ee guriga looga sameeyo jimicsi:
Noocan jimicsiga guryaha waxaa loogu talagalay dadkaas oo iyagu mararka qaar ah ciyaartooy iyo kuwa ku soo noqnoqda xarumaha isboortiga maalin kasta. Waxaa jira dad badan oo ku horumarin kara waxyaabaha noocan ah.
Qafiska dhismaha jirka wuxuu bixiyaa fursado badan, sidaa darteed waxaad ka shaqeyn kartaa meelaha yaryar ku dhowaad dhammaan kooxaha muruqyada.
Markaad nashqadeynayso jimicsiga gurigaaga waa inaad tixgelisaa inta jeer ee isticmaalka. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa miisaaniyadda golaha. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka hesho nooc talo ah xirfadle.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato jimicsiga guriga
Waa inaad tixgelisaa dhinacyada qaar ka hor intaadan jimicsiga ku sameyn guriga. Waxaan ka helnaa mashiinno aan tiro lahayn dhammaan goobaha jimicsiga in la tababaro koox kasta oo muruq ah oo jirkeena ah si madax-bannaan. Si kastaba ha noqotee, guriga ma lihin meel isku mid ah oo aan awood ugu yeelan karno inaan ku shaqeyno kooxo muruqyo ah oo gooni ah kumanaan mashiinno ah. Waa inaan sidoo kale ogaano in goobaha jimicsiga ay tahay inay awoodaan inay qaadaan dad badan, halka guriga kaliya aan joogi doono.
Kaliya waa inaan iibsano oo keliya aaladaha aan u aragno inay lagama maarmaanka u yihiin tababarka lowska. Qaar ka mid ah su'aalaha waaweyn ee aanu inta badan soo jeedin waa in qorshuhu bilaabmo. Waa muhiim inaad ka fikirto inaadan iibsan mashiin kasta oo kaliya u adeegaya in lagu tababaro muruq keliya. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad hesho mashiinno aad uga shaqeyn karto dhowr kooxood oo muruqyo ah isla waqtigaas isla markaana aad ku hagaajin karto booska guriga.
Markay tahay miisaaniyadda, qolka jimicsiga guryaha waxaa loogu talagalay dadka hodanka ah ee boosaska badan haystay. Maanta waxaa jira makiinado fara badan oo qaadaya boos yar si loo jimicsado jimicsiga. Jimicsiga guriga ayaa loo heli karaa qof walba loomana baahna inaad hal mar wada bixiso lacagta.
Marka ay timaado helitaanka qalabka qolka jimicsiga, waa inaan raadinaa qalab badan oo shaqeynaya. Qiimuhu wuu kala duwan yahay iyadoo loo eegayo tayada iyo astaamaha mishiin kasta.
Booska iyo nooca jimicsiga
Midda ugu horreysa oo dhan waa in la arko meesha aan u qoondeynayno si aan jimicsiga ugu dhigno guriga. Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa si dhib yar guriga ugu haysta, waxa ugu badan ee lagula talin karaa waa munaaradaha ama baqashada jir dhiska. Intooda badani waxay kuu oggolaanayaan inaad fuliso tiro jimicsi ah oo aan dhammaad lahayn umana baahna isu-imaatin badan. Waa lagama maarmaan in la helo hal qol oo keliya, xitaa haddii uu yar yahay, oo jimicsi lagu sameeyo. Nooc ka mid ah qodobo badan oo aan cidina seexan ayaa ku filan. Qiime u yeelashada booska aad heli karto si aad ugu dhaqdhaqaaqi karto si xor ah oo hawo fiican leh.
Markaad qolka barato, waxaa muhiim ah inaad dabaqa ka ilaaliso si looga badbaado waxyeelo. Waa inaadan xannibaad daaqadaha si aysan u faragelin hawo socodka qolka. Laguguma talin inaad haysatid alaab guri sida miisaska meesha fayaqabka ah. Qalabkani wuxuu kugu dhiirrigalin karaa inaad nasato wax ka badan intaad u baahan tahay inta u dhexeysa jimicsiga.
Ku saabsan noocyada jimicsi ee ay tahay in lagu soo bandhigo jadwalka caadiga ah waa inaad ku dartaa laylisyo badan oo wada jir ah sida fadhiidka, dhimista iyo kursiga keydka. Kuwani waa layliyo ku lug leh kooxo muruqyo badan oo Carab ah waxayna u fiican yihiin dhisidda murqaha. Kaliya maahan inay soo saarto unugyo cusub, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa xoogga. Xagga xoqitaanka, waa inaad bilowdaa layliga oo taagan adigoo toosan, dhabarkaaga oo toosan lugahaaguna u kala ballaaran yihiin. Ka dib markaad si sax ah u dhigto baarka waa inaad dhaawacdaa jilbaha illaa badhida ay la safan yihiin. Xusuusnow inaadan riixin wax ka badan 90 darajo haddii aadan lahayn dhaqdhaqaaq misig aad u wanaagsan.
Waxa ugu badan ee lagula taliyo fadhiku waa in cagaha ay horay u soo jeedaan iyada oo talooyinka waxoogaa u jeedaan dibedda. Shaqada quadriceps-ka ayaa noqon doonta mid aad u kacsan haddii aan sii wadno oo cagaha ay u furnaadaan ballaca garbaha. Haddii kubbadaha cagaha ay u jeedaan meel fog, shaqada quadriceps waa la dhimayaa.
Dhimashada iyo kursiga keydka
Aynu aragno sida aan ugu shaqeyn karno dhimashadda iyo saxaafadda keydka qolka jirdhiska. Miisaanka dhintay waa mid ka mid ah leylisyo farsamo oo dheeri ah oo qatar weyn oo dhaawac ah haddii aan si fiican loo qaban. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lafdhabarteennu ay gebi ahaanba toosan tahay. Tani waa sida aan u xakameyn karno maqaarkayaga. Lugaha waa in lagu waafajiyaa ballaca garbaha oo kor loo qaadaa baarka illaa aan si buuxda u xasilooneyno oo jilbaha toosan. Baanku waa inuu u kacaa sida ugu dhow dhulkeena intii suurtagal ah.
Sida saxaafadda keydka, waa inaad gashaa meel aad ku haysato baarka indhahaaga hoostiisa. Lugahaagu waxay la jaanqaadayaan ballaca garbaha oo cidhibtiina ayaa dhulka loogu laalay qaanso dhabarka. Xilliga aad baarka ka saareyso, ka nadiifi hawada sanbabada oo baarka kor ugu qaad xabadka dhaqdhaqaaq la xakameynayo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto jimicsiga guriga iyo waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Jimicsiga guriga
Waa maxay faa'iidooyinka tatoosku?